मनोरञ्जन – Page6– MeroJilla.com
दिपक बज्रचार्यले मन मागन कपी गरेको खुलासा । Friday, May 25th, 2018
काठमाडौं । दर्शक श्रोता माझ लोकप्रियता हासिल गरेको हिन्दी गित मन मागन हिन्दी गित हामको निद नही अती संग मेल खाएको छ । यो गित मे तेरा हिरोवाट सभारभएको हो । छोटो समयमै चर्चा कमाएको गितको म्युजिक हुवहु नभए पनि धेरै जसो नट मिल्दा जुल्दा छन । दिपक ब्रजाचार्यको संगित तथा आवाज रहेको सो गितलाई धेरै स्रोता दर्शकले छोटो समयमै धेरै पटक हेरिसकेका छन । प्रतिष्ठीत गायक तथा सर्जकहरुले जानी..
युट्युब ट्रेडिङको नं १मा ‘बोल माया’ Thursday, May 24th, 2018
रामबहादुर थापा ,बागलुङ – विदेशमा प्रियजन गुमाउने नेपाली परिवारको वेदनामा आधारित लोकगीत ‘बोल माया’ अहिले चर्चामा छ । बागलुङका सर्जक प्रकाश सपूतले निर्माण गरेको उक्त गीत अहिले युट्युबमा सर्वाधिक हेरिएकोमध्ये नम्बर १मा छ । सार्वजनिक भएको छ दिनमै उक्त गीत नेपालमा १२ लाखभन्दा बढी पटक युट्युबमा हेरिएको छ । धेरैपछि नेपाली लोकगीत ‘युट्युब टे«डिङ’ को १ नम्बरमा आएको छ । सामाजिक..
बद्रि र रुपा पानी सलल छायाङकनको क्रम्मा मायामा फसेको खुलासा भिडियो सहित …………………………… Wednesday, May 23rd, 2018
पर्वत । कार्यक्रम सञ्चालिका सुमधुर स्वरकी धनी रुपा घर्ती मगरको पानी सलल अहिले चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । नेपाली लोक दोहोरी गीत सङ्गीतको क्षेत्रका लोकप्रिय गायक बद्री पंगेनीको स्वरमा फरक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको लोक दोहोरी गीत “ पानी सलल ” केही समय अगाडि सार्वजनिक सँगै चर्चामा रहेको छ । फरक शैलेको गीत भएकोले दर्शक श्रोताको रोजाई परेको देखिन्छ । गायिका रुपा घर्ती मगरको एल्बम..
रमेशका शब्द कुमार र शर्मिलाको स्वरमा नौमतीको धुन आयो । Monday, May 21st, 2018
लोकप्रिय सर्जक रमेश वि.जीको उत्कृष्ट सिर्जना बजारमा आइरहेका छन । यसैक्रममा नयाँ पञ्चेवाजाको गित नौमतिको धुन सार्वजनिक भएको छ । लोकप्रिय गायक कुमार पुन र पुरानी चर्चित गायीका शर्मिला गुरुङको आवाज रहेको सो गितमा रमेश वि.जीको लय तथा शव्द सिर्जना रहेको छ । केहि समय पहिला वि.जीकै माकुरी सार्वजनिक भए पछि सबैमाझ लोकप्रियता कमाएको थियो । अत्यन्तै उत्कृष्ट शब्द सिर्जना गर्न सक्ने..
बनिन् अामा अभिनेत्री निशा अधिकारी Sunday, May 20th, 2018
काठमाडाैं। अभिनेत्री निशा अधिकारी आमा बनेकी छन् । उनले फेसबुकमा नवजात शिशुको तस्बिर पोष्ट गर्दै बच्चाको स्वास्थ्य सामान्य रहेको उल्लेख गरेकी छन् । उनले छोराको नाम युभन निशारद राखेकी छन् । अभिनेत्री अधिकारी राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य शरद अधिकारीसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकी थिइन् । उनीहरु हाल अमेरिकामा रहेको र त्यहीँस्थित अस्पतालमा बच्चाको जन्म दिएको बताइएको छ..
एकनारायणले १० बर्ष पछि संगै बनाए विमल र बिष्णुलाई झरेको फुलमा पूरा भिडीयो !Merojilla.com! Saturday, May 19th, 2018
सन्तोष के.सी,पर्वत । दर्शक श्रोता सामु धेरै चर्चा कमाएका गायक बिमलराज क्षेत्री र गायीका बिष्णु माझीको “झरेको फुल “गित शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । एकनारायण भण्डारी को सृजना सुपारी चाम्रो,काफल पाकेको गाएका गायक बिमलराज क्षेत्री र बिष्णु माझीले दश बर्ष पछि फेरी एकनारायण भण्डारीको अर्को एल्बम “ झरेको फुल “ मा आबाज दिएका हुन् । सितारा म्युजिक कम्पनिले गितको वजार ब्यवस्थापन..
नेपाली काठको बाक्समा आउँदाको पिडा भिडीयो यस्तो छ………………. Friday, May 18th, 2018
रामकृष्ण लामिछाने । नेपाली लोक क्षेत्रका धरोहर नारायण रायमाझी,प्रकास सपूत र शान्ति श्रीको स्वरमा सजिएको बास्तबीक काहन बोल माया सार्बजनिक भएको छ । यसले नेपालीको यर्थाथ कहानीलाई आम श्रोता दर्शक समक्ष ल्याएको छ । नेपालीको अवस्था हामीले केलाउन ओजेको गायक प्रकाशको भनाई छ ।बोल माया उनकै प्रस्तुती हो । बाँकी..
स्पेनका अनन्तले ‘ जब फूलमा ‘ प्रियंका कार्कीलाई देखेपछि Thursday, May 17th, 2018
स्पेन । अनन्त लामिछाने पहिलोपटक म्युजिक भिडियोमा देखिएका छन् । पर्बत जिल्लामा जन्मिएर हाल स्पेनमा बसोबास गरेका लामिछाने ' जब फूलमा ' गीतको बोलमा मोडलिङ्ग गरेका छन् । बिपिन आचार्यको शब्द र संगीत रहेको उक्त गीतमा माण्डबी त्रिपाठीको स्वर रहेको छ । समान अधिकारी द्वारा निर्देशन गरिएको उक्त भिडियोमा अहिलेकी चर्चित नायिका तथा मोडल प्रियंका कार्की संग लामिछानेलाई देख्न पाइने छ..
छक्का पञ्जा ३ आउँदै फन्को रिपोर्ट पुरा भिडीयो सहित Wednesday, May 16th, 2018
रामकृष्ण लामिछाने काठमाडौं । छक्का पञ्जा भाग १ र २ ले राम्रो व्यापार गरेको छ । पछिल्लो समयमा छक्का पञ्जा ३ आगामी असोज ३० मा प्रदर्शन हुने भएको छ । यसको सुटिङ अहिले काठमाडौ लगायतका विभिन्न शहरहरुमा हुदै छ । दिपकराज गिरी र दिपाश्री निरौलाले यसलाई प्रदर्शन गर्न लागेका हुन । थप रमेश..
फ्लोरमा ‘छक्का पञ्जा ३ Saturday, May 12th, 2018
काठमाडौं । दीपाश्री निरौलाको तेस्रो निर्देशनमा बन्न लागेको सिनेमा ‘छक्का पञ्जा ३’ शुक्रबारदेखि फ्लोरमा गएको छ । शुक्रबार बिहान भक्तपुरको सूर्यविनायक मन्दिरमा पूजाआजासहित एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर सिनेमाको शुभमुहुर्त गरिएको छ । कार्यक्रममा नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदय, नेपाल चलचित्र पत्रकार संघका अध्यक्ष संदीप सापकोटा, वितरक गोपालकाजी कायस्थ,..
पर्वतकै पुरानो क्लव पर्वत मिलन क्लवद्धारा “लम्फू“ प्रदर्शन Thursday, May 10th, 2018
पर्वत । वैशाख २८ गते रिलिजको तयारीमा रहेको चलचित्र लम्फूको वैशाख २६ गते नै कुश्मामा च्यारिटि शो मार्फत प्रदर्शन गरिएको छ । पर्वतकै पुरानो क्लव मिलन क्लवद्धारा “लम्फू“ प्रदर्शन भएको हो । चलचित्रको समायोजन गरेको क्लवका अध्यक्ष लक्ष्मण श्रेष्ठले चलचित्र निकै सन्देश मुलक रहेको बताए । चलचित्रका निर्देशक लामिछाने संस्थापक अध्यक्ष रहेको उक्त क्लबले चलचित्रको च्यारिटि शो..